Terraforming: ihe ọ bụ, njirimara na mbara ala ka terraform | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na mmadụ na-emebi akụ ndị sitere n'okike nke ụwa anyị n'ọtụtụ oke na mbibi nke ụdị anyị na-ebili ọtụtụ oge n'ihi mbibi nke ụwa anyị. N'ihi nke a, e nwere okwu nke nhazi. Ọ bụ maka mmegharị nke mbara ala ndị ọzọ maka ọnọdụ obibi mmadụ dabara adaba maka mmadụ. Mmalite nke terraforming mere na akụkọ sayensị, mana ekele maka mmepe nke sayensị, na mpaghara sayensị ọ na-ewere ọnọdụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ usoro nke terraforming na nke mbara ala nwere ike ime ka ha biri.
2 Planet ndị ọzọ na terraform
3 Terraforming nke Mars
4 Na-ebi na ala
Achikota eziokwu banyere ịkpụzi terraform na ịchọ ụwa na ịhazi ikuku ya ka ọ bụrụ ebe mmadụ bi. Ozugbo ụwa amaala jijiji ị nwere ike ikwu maka ebe obibi enwere ike ị were mmadụ. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịmara na imeghari ikuku na ebe obibi, kamakwa usoro mmụta na mbara igwe iji mee ka ha yie ụwa anyị. Otu n'ime ihe ndị mmadụ na ndị ọkà mmụta sayensị na ọha mmadụ na-ahụkarị bụ Mars.
E nwere ọtụtụ ndị ode akwụkwọ a ma ama bụ ndị tụpụtara ịtụgharị Mars ka ọ bụrụ ụwa a gbanwere maka ndụ mmadụ. Enwekwara mbara ala ndị ọzọ enwere ike ịkọwapụta ma gbanwee ọnọdụ maka mmadụ. Terraforming bụ fọrọ nke nta dị mkpa nzọụkwụ na mmepe na nlanarị mmadụ dị ka ụdị. Ka anyị lee ndị nke mbara ala nwere ike ịchị. Ihe ezi uche dị na ya ime bụ ịmalite na mbara ala ndị ahụ na sistemụ anyanwụ nke kacha nso ụwa. Ọ bụ ezie na Venus bụ ụwa nke kachasị nso, ọnọdụ nrụgide nke ikuku ya dị oke elu ma nwee igwe ojii nke sọlfọ sulfuric na-ekpo ọkụ na oke okpomọkụ. Nke a na-eme ka ihe ịma aka nke ibi na Venus too oke.
Dị mfe ma bụrụ ihe okike ga-amalite site na Mars.
Planet ndị ọzọ na terraform
Ndị dike gas dị na mbara igwe bụ Jupiter, Uranus, Saturn na Neptune. Ha nwere nsogbu doro anya na ha enweghị ebe siri ike ịnọ na ya ma e wezụga isi. Nke a na-eme ha mbara ala ndị na-adịghị ọbụna echiche maka terraforming.
Oké osimiri ndị mbara ala nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu oké osimiri mejupụtara ma ọ bụ bụrụ nke a na-ejikarị eme ihe na akụkọ sayensị. Na ihe nkiri Interstellar ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ Solaris ị ga - ahụ etu mbara ala si bụrụ ala ala enweghị ike ịchị. Enwere ike idozi nke a n'ụzọ dị mfe n'adịghị ka mbara ala gas, mana ọ ka ga-abụ ọnụ ahịa dị elu. Agbanyeghị, mbara ala ndị a anaghị akwụsi ike site na ihu igwe n'ihi na ha enweghị ala nke ala ma ọ nweghị okirikiri na carbonate.
Na oke osimiri mbara igwe na-ekpochapu oke na carbon dioxide oke osimiri n’onwe ya na-ewepụ ya nke ọma mana lithosphere anaghị ahapụ ya. Nke a na - eme ka mbara ala dị jụụ n'ụba ma banye n'ọgbọ akpụrụ na n'ọgbọ na - esote ya, anwụ na - acha ọkụ ga - abawanye ụba wee mepụta alụlụ mmiri ọzọ wee gbazee ice ahụ. Mbara mbara ala ndị nwere oke osimiri na-agbanwe oke agbanwe ma ha enweghị ajụjụ maka usoro nhazi ụwa.
Maka ihe kpatara anyị kwurula n’elu, otu mbara ala ndị mmadụ lebara anya na mbara ụwa bụ Mars. N'oge a Enwere ọrụ abụọ dị oke mkpa maka njem njem Mars, ọ bụ ezie na ọ bụghị maka ịkọwa ihe. Nke a gosiri na ụwa a ka na-akpali ndị mmadụ inwe nnukwu mmasị. Planetwa a dị ka orwa ma ọ bụ Venus enweela akụkọ banyere ọdịdị ala. Otu ihe kachasị mkpa bụ na ọ bụrụ na e nwere mmiri n’oge gara aga na ole ọ bụla dị. Ọ bụ akụkụ nke oge ọ bụla a kwenyesiri ike n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nakwa na oké osimiri bịara were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke elu ala.
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ebe na-adịghị mma ebe ọ bụ na obere ikuku ya na-eme ka ọ nwee ihe ruru otu puku ụzọ nke ikuku nke dị na mbara ụwa anyị. Otu n’ime ihe kpatara ịdị ndụ dị gịrịgịrị dị otú ahụ bụ n’ihi na a ike na-adịghị ike iru ụkpụrụ nke 40% na-erughị na ụwa na n'aka nke ozo enweghi nke magnetosphere. Ekwesiri iburu n'uche na magnetosphere bu nke na - eme ka ikuku ikuku nke ikuku adighi adighi agha ma nwee ike imetụta ikuku. Anyị maara na ụmụ irighiri ihe ndị a nwere ike jiri nwayọ bibie ikuku.
Planetwa anyị na-ahụ enweghị ndọta ma nwee ikuku sara mbara ebe ọ bụ na ike ndọda ya karịrị ukwuu. Oké osimiri na-agbanwe ọtụtụ ihe ma nwee ike iru ụkpụrụ nke narị ogo ogo dị ala na ogo 30 na mpaghara equatorial. Ifufe anaghị adịkarị ike na ikuku ikuku na-eme na oge ụfọdụ. Oké ifufe dị otú ahụ nwere ike ikpuchi ụwa dum.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na anyị na-ahụ mbara ala nwere ikuku dị warara, ọ dị mfe ịchọta ọsọ ikuku nke ruru 90 km / h. Njupụta dị ala na Mars na enwere obere esemokwu. Ihe ọzọ emerela maka ike ọgbọ na Mars bụ ike ifufe ebugharị igwe. A ga - ebelata ikike a ọbụlagodi na - ewere ọsọ ọsọ nke oke aja nke ọzọ kpatara.
Na-ebi na ala
Ihe njirimara uhie na-acha ọbara ọbara nke mbara ala Mars bụ n'ihi ọnụnọ nke ígwè oxides dị ka limonite na magnetite na ikuku. Nke a na - eme ka dayameta nke ihe ndị ahụ dị ntakịrị karịa ogologo nfe nke ọkụ nke na-abanye na mbara ụwa ma nwee ike ihu na ikuku. Ikuku oxygen ikuku nke ikuku dị na ikuku enweghị ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na ikuku nke ikuku bụ site na 95% ma ọ bụ karịa carbon dioxide, na-esochi nitrogen na argon.
Enweghị oghere magnet na-eme ka ụzarị ikuku na-akụ Mars, ya mere ihe ikuku ikuku anyanwụ na ọkwa radiesị dị elu karịa ụmụ mmadụ. Otu ga-ebi n'okpuruala.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere terraforming nke Mars na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Na-emegharị